R/wasaare Gaas oo la kulmay Issimada Sool, Sanaag & Cayn. – Radio Daljir
Garowe, Aug 27 – R/wasaaraha dawlada federaalka ah ee Somaliya Dr. C/weli Maxamed Cali ‘Gaas’ iyo waftigiisa ayaa shir wadatashi ah la yeeshay Issimada gobolada Sool, Sanaag & Cayn.
Issimada iyo R/wasaaraha ayaa ka wada hadlaya xaalada gobolada SSC iyo sida ay dawlada federalku uga qayb qaadan karto xal u helida xaalada gobolladaasi ee dhinacyada amniga, siyaasada, mashaariicda horumarineed, iyo gaarsiinta adeegyada aasaasiga ah bulshada guud ahaan, gaar ahaan bulshada inteeda danyarta ah.
Khilaafaadka ka dhex aloosan siyaasiyiinta beesha SSC ayaa sidoo kale la isla soo qaaday, iyada oo ay Issimadu cadeeyeen in mawqifka shacabka SSC uu yahay mid ku salaysan midnimada ummadda Somaliyeed, maamul iyo deegaan ahaanna ay ka tirsan yihiin Puntland.
Issimadu waxaa ay meesha ka saareen in uu jiro wax maamul ah u gaar ah beesha oo aan ka ahayn dhismihii maamulka Puntland ee sanadkii 1998-kii; Issimada ayaa ku adkeeyey madaxda dawlada federaalku in ay ka digtoonaato kooxaha magaca beesha u adeegsada dano siyaasadeed oo iyaga u gaar ah.
R/wasaaraha Gaas ayaa dhiniciisa sheegay in aanay jirin cid maamul sheegata oo xukuumadiisu ay casumaad u fidisay.
R/wasaaraha dawlada federaalka ah ayaa ballan qaaday in uu xiriir toos ah la yeelan doono Issimada, wada shaqayna ay yeelan doonaan wixii hadda ka dambeeya.
Kulanka ayaa waxaa martigeliyey M/weyne ku xigeenka Puntland Gen. Cabdisamad Cali Shire, waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka waxbarashada ee dawlada federaalka ah Prof. Axmed Caydiid Ibraahim iyo madax kale oo ka tirsan golayaasha dawlada Puntland.
Issimada goobjoogga ka ahaa shirka ayaa kala ahaa:
Garaad Saleebaan Garaad Maxamed, Garaad Abshir Saalax, Boqor Cabdilaahi Axmed Cali, iyo Ugaas Faarax Maxamuud.